သာလွန်ဇောင်းထက်| January 17, 2013 | Hits:21,371
job agency January 17, 2013 - 5:38 pm NaY Zin Latt should also be axed.
Reply နံသာနီ January 17, 2013 - 8:14 pm ကြိုက်တယ်။
Reply swe htwe January 18, 2013 - 12:15 am We think anti-corruption committe should investigates ministers ,directors-generals and directors first.
Reply Shwe Yoe January 18, 2013 - 11:07 am Swe,
Reply မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ January 18, 2013 - 3:31 am ဧရာဝတီ သတင်းထောက်က သတင်းထဲမှာ ရေးတယ်။ “ဒါကိုကြည့်ရင် ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးတွေအနေနဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ အဆင်ပြေဖို့တင်မက သမ္မတရုံး ၀န်ကြီးတွေနဲ့ပါ အဆင်ပြေဖို့ပါ လုပ်ဆောင်နေရတယ်ဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်။” တဲ့။
Reply Salai Lian January 18, 2013 - 6:43 am It means they are getting away with tons of laundered money, right? Investigation must be properly conducted and the result must be followed by punishment or reward. In Burma, we just see cover-ups. Crimes committed by high-ranking personnel disappear under the skin of their fellow thieves but petty thefts are taken seriously. Whatagovernment! The snake sees the other snakes’ feet. These people came out of the same womb. They all are the same. How can they get our trusts? Do they deserve our trusts?
Reply horace yan January 18, 2013 - 8:26 am excellent news paper.
Reply Shwe Linyone January 18, 2013 - 9:36 am They will keep stealing and when they have enough, they will resign and retire peacefully. The best jobs in the world. They will keep leasing confiscated lands to companies and money will keep flowing into their bank accounts. If I can get these kinds of jobs, how good life might be? Well, it is not right in the end. Dignity and honor cannot be bought with money. Eating Chinese green(Gayoon-ywat) withabowl of rice still gives me joy and peace because I eat what I bring home legally. Thein Sein told them to go home quietly, not to let the people see what they brought home.
Reply pps၁၂၃၄၅ January 18, 2013 - 12:52 pm ကိုသိန်းထွန်းကတော့ တင်ဒါတွေဘယ်လိုခေါ်သင့်တယ် ဆိုပြီး သတင်းစာထဲမှာ ထည့်ပြီးတော့ အကြံဥာဏ်တောင်းတဲ့ ပထမဆုံး ဝန်ကြီးပါ။
Reply pnwara January 18, 2013 - 1:15 pm သန့် ရှင်း ကောင်းမွန်တဲ့ အစိုးရ ဖြစ်ဘို့ဆိုလျှင် သမတ အနေနဲ့ပွင်းလင်းဘို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မဆလ ခေတ်ကလို မဆလ လမ်းစဉ်အတိုင်း မိမိဆန္ဒ အလျှောက် နှုတ်ထွက်
Reply winkyqueen January 18, 2013 - 3:47 pm “ဒါတော့ ကျနော်လည်း မသိပါဘူး။ သူတို့ကတော့ သူတို့ဆန္ဒအလျောက် နုတ်ထွက်တာဖြစ်လို့ သူတို့အပေါ်မှာ ကျနော်တို့က မှတ်ချက်လည်း ပေးလို့မရပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက် ဖြစ်လို့လေ” လို့ ဒု ဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်က ဆိုပါတယ်။
Reply ဖိုးလုံး January 18, 2013 - 4:05 pm အမိန့်စာမှာ မိမိသဘောဆန္ဒအလျောက် နုတ်ထွက်ခွင့်ပြုတယ်လို့ ရေးသားထားတယ်ဆိုတော့ သူတို့က ၀ သွားကြလို့လား။ ဒါမှမဟုတ် စားကျက်(စားခွက်လို့ မပြောရက်ပါ။) လုရင်းအဝေမတည့်လို့ ပ ထုတ်ခံလိုက်ကြရတာကိုထုံးစံအတိုင်းလူကြားကောင်းအောင် စာသားပြင်ထည့်ထားတာလား။ စဉ်းစားစရာပါ။
Reply Aung Ye' Myint January 19, 2013 - 11:32 am ဧရာဝတီ သတင်းထောက်က သတင်းထဲမှာ ရေးတယ်။ “ဒါကိုကြည့်ရင် ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးတွေအနေနဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ အဆင်ပြေဖို့တင်မက သမ္မတရုံး ၀န်ကြီးတွေနဲ့ပါ အဆင်ပြေဖို့ပါ လုပ်ဆောင်နေရတယ်ဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်။” တဲ့။
Reply Aung Ye' Myint January 19, 2013 - 12:03 pm စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ.
Reply winkyqueen January 19, 2013 - 1:39 pm စောင့်ကြည့်ကြစို့ လေကွယ်
Reply Win Myint Than January 19, 2013 - 8:22 pm သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ၀န်ကြီးတွေ အပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့ ကိစ္စတွေကို အဓိကအားဖြင့် ဦးစိုးသိန်း၊ ဦးအောင်မင်းတို့ နှစ်ဦးနဲ့သာ တိုင်ပင်လေ့ရှိပြီး ၀န်ကြီးတွေ အများစုကလည်း ဦးစိုးသိန်းနဲ့ ဦးအောင်မင်းကို “အဘကြီး” တွေလို့ ခေါ်ဆိုကာ ကြောက်ရွံ့ ရိုသေလေးစား ကြရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Reply soe min January 22, 2013 - 8:21 pm စွမ်းအင်ဝန်ကြီး အလှည့်ဘယ်တော့လောက် ဖြစ်မလဲမသိဘူးနော်။ ခုထိ အောက်ခြေကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်မပေးပဲထားတာတွေရှိတယ်ျာ
Reply rocker January 22, 2013 - 9:08 pm ရုပ်သေးရုပ်တွေလေဗျာ….
Reply [email protected] January 31, 2013 - 5:31 pm အ မြဲ အား ပေး နေ မှာ ပါ
Reply Myint Kyaw February 21, 2013 - 8:47 pm နှစ်သက်သည်ဆက်၍ကြိုဆိုသည်
Reply အောင် March 9, 2013 - 10:02 am ဦသောင်တင်ကRဇာနီမဟုတ်ဘူး
Reply soeoo March 11, 2013 - 12:52 pm တစ်တော့နိူင်ငံတစ်နိူင်ငံမှာပြည်သူအတွက်တာဝန်မကျှေဘူးဆိုရင်တော့တာဝန်ပျှက်ကွက်တဲ့ ၀န်ကြီးသာမက အောက်ခြေက၀န်းထမ်းတွေအထိ၊ထိရောက်စွာအရေးယူ အပြစ်စ်ပေး၇မှာဖြစ်တယ် democracy ထွန်းကာတဲ့အနောက်နိူင်ငံတွေမှာဆိုရင်မိမိကအမှားတစ်ခုကိုလုပ်မိလိုက်ရင်ပြည်သူကိုဝန်ချှတောင်းပန်ပြီးရာထူးကနေနူတ်ထွက်သွားကြပါတယ် ဒါဟာမိမိရဲ့ အမှားအတွက်တာဝန်ယူတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါ တိုင်းပြည်အတွက်အကိူးမပြုဘူးဆိုရင်တော့သမတဦးသိန်စိန်၇ဲ့ လုပ်ဟာကောင်းတယ်လိုထင်ပါတယ်